Kaliya su'aal sano 3 4 bilood ka hor #360
Midkani waa inuu noqdaa su’aal aad u fudud… ama laga yaabee inaysan ahayn. Waxaan ahay taageere Airbus, waana qirtay taas. Iyo tan iyo kulankeygii ugu horreeyay ee aan la yeesho Sims duulimaadka, soo saaraha diyaaraddaasi wuxuu ahaa kan aan jeclaa. Markaa, gudaha FGFS, FS2004 iyo hadda gudaha FSX, ma jiraan wax diyaarad Airbus ah oo fiican oo la isku halleyn karo. Waxaa jira diyaarado payware laakiin ma awoodi karo.
Su'aashu waa sidan: Ka waran laba Sims oo kale,X-Plane iyo P3D, ma jiraa wax si buuxda u shaqeeya oo bilaash ah oo hawlahooda Airbus ah midkoodna?
Dhibaatada ugu weyn ee I haysata diyaaraddaha Airbus, gaar ahaan Thomas Ruth A330 / 340 iyo PA A380 FSX waa in PFD ka maqan tahay hal shay oo fudud. Duubista IAS ma muujineyso labada xarumood iyo kuwa duullimaad labadaba, diyaaradda ay isagu is leedahay ma ahan wax laga naxo. Ma jirto si loogu duulo si sax ah. Muddo bilooyin ah waxaan isku dayayaa inaan xoogaa caawimaad ka helo taas laakiin cidina, gebi ahaanba FSX bulshada waxay rabaan inay i caawiyaan.
A320 xirmooyin kala duwan oo badan, oo laga heli karo Rikoooo waa mid cajiib ah, dhamaanba waxaan rabaa in aan ku wareejiyo waxyaabo, sida PFD ee dukumintiyada la xusay, ama ugu yaraan TR A330. Weydii meelkasta oo ah sida loo sameeyo ... isla markaana waqtigeygii iigu baaba'ay.
Ku laabashada FGFS dhab ahaantii waa ikhtiyaarkii ugu dambeeyey laakiin waan ku farxi doonaa haddii aaney jirin wax kale.
Kaliya su'aal sano 3 4 bilood ka hor #367
HADDII Muujin, adigu waad awoodi kartaa inaad sameysid faylka aircraft.cfg si aad u hagaajisid. Waxaan dhab ahaantii ku qasbanahay inaan sidaan ku sameeyo CLS DC-10-30F. Waxay kuusoo gaabiyeen 4.5K gallon oo shidaal ah, waxayna hoos u dhigtay culeyska miisaanka oo ka hooseeya waxa dhab ahaantii ahaa.
labadaba tweaks faylka aircraft.cfg iyo waxay ahayd sidii ay noqon lahaa. hadda waxaan duuli karaa duulimaadyo badan oo maxalli ah oo dhibaato ah
Kaliya su'aal sano 3 4 bilood ka hor #369
Si fudud oo aan u muujin, iyo faylka cfg, xawaaraha joogsigu waa mid aan caadi ahayn ... 120 kts? Kaliya fiiri qaar ka mid ah fiidiyowga cockpit ee YT oo waxaad arki doontaa in ay dhab ahaan u dhexeyso 155 iyo 160, sidaa daraadeed 120 ... waxaad ku dhamaan doontaa warka.
Waxaan isku dayi doonaa, si hubaal ah.
Kaliya su'aal sano 3 4 bilood ka hor #371
Anigu waxaan fiirin doonaa Dash-8 cfg faylka oo hubi in nuugistu ay tahay mid sax ah oo aan ku xiran yahay xitaa xitaa xitaa inaan KALA BADBAADINin si aad u sarreeya xayiraadahaas oo aan si sax ah u caawino wax lol
Ma qaadi karno shidaalka aan xadidnayn marka aan duulinno oo aan dib u soo celino hawada qadka dhexe.
Kaliya su'aal sano 3 4 bilood ka hor #372
Horumarinta diyaaradaha ayaa ah s ...
Kaliya su'aal sano 3 4 bilood ka hor #373
Nasiib wacan oo igu soo dhaweynaya inaan kula xaajoodo lMAO
Ya waxay ogtahay inay noqon doonto NICE haddii ay dadku samaystaan ​​diyaaradahan Flight Sim waxay dhab ahaantii sameeyaan f'in 'research first or know know ??? >.>
Waxaan qabaa inaan tagi doono godadka qaar ka mid ah cirka ee Mach 2 ee Concorde. MAYA WAXQABAD ISTICMAALAA Maqal aan yareyn doono muraayadaha yar ee wadada
Kaliya su'aal sano 3 4 bilood ka hor #386
Waxaan u maleynayaa, kuwa soo-saareyaasha, waxay ku filnaan lahayd inay la hadasho duuliyayaasha caalamka dhabta ah.
Ku saabsan dhibaatooyinka A340 PFD ... sidoo kale way fududahay in la baddalo qiimaha qaar ka mid ah faylka .cfg diyaaradeed, laakiin taasi waxba isma bedelin. PFD ayaan muujineyn labadaba labadaba iyo kuwa taagan, sidaa darteed waxaan filayaa inaan saxay. Taas waa in la bedelaa meelo VC ama faylasha faylka ah mana haysto wax faahfaahin ah sida loo sameeyo.
Aad ayaan u xanaaqsanahay sababtan darteed, inaanan dhab ahaan u rakibay FGFS iyo A346 ... xitaa niyad jab aad u xun, xitaa kuma bilaabi karno halkaas, markale FSX una halgama sidii loo xallin lahaa PFD-kaas.
Kaliya su'aal sano 3 4 bilood ka hor #387
halka halganka, maareynta niyadjabka,, waxaa jira wax wanaagsan oo ku saabsan dhammaan tan,, waxaad baraneysaa.
Mar walba ma fududa in wax laga barto noloshaan, waxaan ku raacsanahay ,, laakiin ijaarka aad isku dayeyso si aad u xalliso dhibaatada,
waana taas oo ah jihada waddo si ay u timaaddo si guul leh
Kaliya su'aal sano 3 4 bilood ka hor #389
Hey Colonelwing, maxay tahay?
Waa hagaag, ma aha inaan la shaqeeyo habkaan, ugu yaraan ma leh Air Sims. Haddii wax aan shaqeynin, si toos ah ayey u socotaa qashinka qashinka. Ha doonaynin in aad qashin wakhti kasta iyo dareemayaasha.
Nolosha dhabta ah, ogolow sababta noloshayda oo dhan waa halgan, laakiin taasi waa sheeko kale, maahan meeshan.
Kaliya su'aal sano 3 4 bilood ka hor #392
Well, dhammaan run ahaantii waa inaad sameysaa waa fiiri Wikipedia markii ay timaado info aircraft, si daacad ah ... ugu yaraan ganacsiga.
Time si ay u abuuraan page: seconds 0.305